June 11, 2018 June 11, 2018 admin426
Khilaafka Madaxda Sare ee Galmudug ayaa wali cirka ku shareeran, Madaxda ayaa fadhiisan ka kala dhigtay Dusmareeb iyo Cadaado. Waxaana gaabis ku socda howsha u kala dab qaadista labada Dhinac. Dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqata in aysan ku degdegeynin xal u helista khilaafka Madaxda Sare Galmudug. waana arin ka badalan sidii laga filayey. Dhanka kale Madaxda Dowlad goboleedyada oo hogaaminayo Cabdiwali Gaas ayaa la saftay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf.
Shalay Waxaa magaalada Cadaado ka furmay kalfadhiga 7aad ee Barlamaanka Galmudug, Sidoo kale Madaxweyne Xaaf ayaa la filayaa inuu isna dhankiisa dhawaan ku dhawaaqo Gole Wasiiro cusub, Waxaana talaabooyinka uga darayaan khilaafkii horey uga dhaxeeyey Madaxda Sare Galmudug.
Macalin Maxamuud Sheekh Xassan hogaamiyaha ruuxiga ah ee Ahlu Sunna ayaa looga yeeray Magaalada Muqdisho, ma cadda cidda u yeertay, laakiin warar qaar ayaa sheegaya in looga yeeray Xerada Xalane oo ah saldhiga Beesha Caalamka. Macalin Maxamuud ayaa ah ninka daaha gaadiisha ka hagaya howlaha ka socda Caasimadda Dusmareeb. Waa Wadaad Mayal adag, lagana heebaysto.
Dhanka kale magacaabista Golaha Wasiirada Cusub ayaa dib u dhacday dhowr jeer sida ay inoo xaqiijiyeen ilo xog-ogaal ah oo ku sugan caasimadda Galmudug Magaalada Dusmareeb, waxaana la sheegaya in khilaaf ka jiro wasiirada muhiimka ah oo ay ururka Ahlu Sunno doonayaan in qaataan, sida wasiirada Amniga, Waxbarashada iyo Maaliyadda. Bulshada Galmudug ayaa u arka khilaafka Madaxda Galmudug mid dhibaato ku ah horumarka laga filayey maamulkan oo noqday mid khilaaf u joog ah.
Askarigii Maraykanka ee lagu dilay Soomaaliya oo la aqoonsaday
Cadaado: Askar la goostay gaari ay wateen ciidanka Amisom